कोरोना नियन्त्रणसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक (भिडियाेसहित) « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 1 June, 2020 1:56 pm
काठमाडौं । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउन र यसले मानव स्वास्थ्यमा अझ विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यका विषेश प्रभाव जमाउने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम जन संवादमा कुरा गर्दै डा. अनन्त अधिकारीले लकडाउनका कारण मानिसहरु घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने बताउनुभयो ।
कोरोनो भाइरस नियन्त्रणसँगै विश्वमा मानसिक स्वास्थ्यको चुनौति बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि देखाएको छ । लकडाउनको सुरुवातपश्चात आत्महत्याका घटना बढेको र यो मानसिक समस्याका कारण भएको डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
‘संक्रमणबाट बचाउनु जति आवश्यक छ उनीहरुलाई मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु पनि त्यति नै जरुरी रहेको छ’, डा. अधिकारीले भन्नुभयो, ‘त्यसतर्फ सरकारको ध्यान कम पुगेको देखिएको छ, जनतामा ल्याउनुपर्ने जागरणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
गोरखा समाजद्वारा कोरोनाबाट जीवन गुमाएका परिवारलाई सहयोग
काठमाडौं । गोरखा समाज, अमेरिकाले पालुङटार नगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जीवन गुमाएका परिवारलाई सहयोग गरेको
सावधान ! अब कहाँ कहाँ आउँछ बाढीपहिरो ?
काठमाडौं । केहीदिन यताको अविरल वर्षाले मुलुकको विभिन ठाउँमा बाढीपहिरो गइरहेको छ । मनसुन शुरु
काठमाडौं । यसवर्ष वर्षायाम शुरु भएपछि अहिलेसम्म बाढीपहिरोबाट ८८ जनाले जीवन गुमाएका छन् । मनसुन